Izinqubo Zobumfihlo | Isikhungo sokuphepha se-Google
Imithetho yethu yobumfihlo nokuphepha
Sakha ubumfihlo obusebenzela wonke umuntu. Kungukuzibophezela okuza nokudala imikhiqizo namasevisi lawo amahhala futhi afinyelelakayo kuwo wonke. Lokhu kubaluleke kakhulu njengoba ezobuchwepheshe ziqhubeka futhi ubumfihlo budinga ukuthuthuka. Sibheka le mithetho ukwenzela indlela imikhizo yethu, izinqubo, nabantu bethu ukugcina idatha idatha yasebenzisi bethu iyimfihlo, iphephile, futhi ivikelekile.
1. Hlonipha abasebenzisi bethu. Hlonipha idatha yabo.
Sikholwa ukuthi le mibono ayihlukaniseki. Ngokuhlangene, imela inkolelo eyodwa, eqinile ukuthi ekhuthaze yonke into esiyenzile kusuka ekuqaleni, nayo yonke into esizoyenza ukuya phambili. Uma abantu basebenzisa imikhiqizo yethu bayasithemba ngolwazi lwabo, futhi kungumsebenzi wethu ukwenza okulungile ngalolo lwazi. Lokhu kusho ukuthi sicabangisisa kahle ngokuthi iyiphi idatha esiyisebenzisayo, nokuthi siyivikela kanjani.
2. Yazi kahle ukuthi iyiphi idatha esiyiqoqa nokuthi kungani.
Ukusiza abantu ukuba benze izinqumo ezazisiwe mayelana nendlela ebasebenzisa ngayo imikhiqizo ye-Google, senza kubelula ukuqonda ukuthi iyiphi idatha esiyiqoqayo, ukuthi isetshenziswa kanjani nokuthi kungani. Ukungafihli lutho kusho ukwenza lolu lwazi lutholakale ngokulungile, luqondeke, futhi kwenziwe okuthile.
3. Ungalokothi uthengisele omunye ulwazi lomuntu siqu.
Sisebenzisa idatha ukwenza imikhiqizo ye-Google efana nosesho namamephu ukuthi ibelusizo kakhulu. Futhi sisebenzisa idatha ukunikezela ngezikhangiso ezihlobene kakhulu. Ngenkathi lezi zikhangiso zisiza ukupha imali amasevisi ethu nokuwenza abemahhala kuwo wonke umuntu, kubalulekile ukucacisa ukuthi ulwazi lwethu lomuntu siqu aluthengiswa.
4. Yenza kubelula ukuthi abantu balawule ubumfihlo babo.
Uma kufika kwezobumfihlo, siyazi ukuthi usayizi owodwa awulingani konke. Yonke i-akhawunti ye-Google yakhiwe ngezilawuli/ngaphandle kwezilawuli zedatha, ngakho-ke abasebenzisi bethu bangakhetha izilungiselelo zabo zobumfihlo ezibalungele. Futhi njengoba ubuchwepheshe bukhula, izilawuli zethu zobumfihlo ziyakhula nazo, ukuqinisekisa ukuthi ubumfihlo buhlala buyinketho yomuntu ngamunye obuhlala kumsebenzisi.
5. Khuthaza abantu ukuba babuyekeze, bahambise, noma bause idatha yabo.
Sikholwa ukuthi wonke umsebenzisi kufanele abenokufinyelela kulwazi lomuntu siqu ababelane ngalo nathi – noma kunini futhi nganoma isiphi isizathu. Ingakho siqhubeka nokwenza kubelula ukuthi abantu bafinyelele futhi bathole idatha yabo, bayilande futhi bayise kwenye isevisi uma bafuna, noma bayisuse yonke.
6. Ukwakha ubuchwepheshe obunamandla emikhiqizweni yethu.
Ukuhlonipha ubumfihlo babasebenzisi bethu kusho ukuvikela idatha abasithemba ngayo. Ukugcina wonke umkhiqizo nesevisi ye-Google iphephile kubasebenzisi bethu, siqinisa futhi sisebenzise esinye sezingqalasizinda zokuphepha esithuthukile emhlabeni. Lokhu kusho ukuqinisa njalo ubuchwephese bethu obakhelwe ngaphakathi ukuthola nokuvikela ubugebengu be-inthanethi, ngaphambi kokuthi kufinyelele abasebenzisi bethu.
7. Hola ngesibonelo ukuze uthuthukise ukuphepha kwe-inthanethi kuwo wonke umuntu.
Ukugcina abasebenzisi baphephile ku-inthanethi akugcini nge-Google – kuqhubekela kuyo yonke i-inthanethi. I-Google kwaba inkampani yokuqala ukudala amazinga okuphepha amaningi esiwasebenzisa sonke namuhla, futhi siqhubeka nokuqalisa ubuchwepheshe bokuphepha obusha obungasetshenziswa abantu bonke. Sabelana ngokufunda, ulwazi, kanye namathuluzi okuphepha nozakwethu, izinhlangano, nesiqhudelana nabo emhlabeni, ngoba ukuphepha kwe-inthanethi kudinga ukuhlanganyela okubanzi kokuphepha.
Funda kabanzi mayelana namandla okuphepha
Ukuvikelwa okwakhelwe ngaphakathi
Ukubonisa ngale kwedatha
Umuzwa olungele umndeni